ခံတွင်း-ပါးစပ်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ (Common Oral Mucosal Lesions) | | Colors Rainbow
March 22, 2016 June 28, 2018 admin 4262 Views 1 Comment Common Oral Mucosal Lesions, ဒေါက်တာ တင့်ဆွေ	min read
ကျွန်မအမျိုးသားက အသက် ၃၃ နှစ်ရှိပါပြီ။ သူ့ရဲ့ အောက်နှုတ်ခမ်း အတွင်းဖက်မှာ အဖုလေးတစ်ဖု ပေါက်လာတာ နှစ်လလောက် ရှိပါပြီ။ အဲဒီအဖုက အအေးသောက်ရင် မသိသာပေမယ့် အပူနဲ့ထိမိရင် စားတော်ပဲစေ့လောက် ကြီးလာပါတယ်။ အရည်အိတ်လို ပုံစံမျိုးပါပဲ။ တစ်ခါလည်း အရည်ပေါက်ထွက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အကျိတ် ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးခန်းတော့ မပြဖြစ်သေးပါဘူး ဆရာ။
အသိ ဆရာဝန်တယောက်ကို မေးကြည့်တော့ ကင်ဆာလက္ခဏာနဲ့ တူတယ်ဆိုလို့ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်လုံး စိုးရိမ်မိပါတယ် ဆရာ။ နာတာကျင်တာတော့ မရှိဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ ဆေးစစ်ဖို့က နောက်လလောက်မှ လုပ်ဖြစ်မှာမို့ လောလောဆယ် ဆရာ့ဆီကို စာရေး အကူအညီ တောင်းရတာပါ။ ဘာ ရောဂါဖြစ်နိုင်လဲ သိချင်ပါတယ်ရှင်။
ပါးစပ်-ခံတွင်းထဲမှာ အများဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါအခြေအနေ (၁၂) ခုကို ရွေးရေးပါမယ်။ တခြားဟာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။
1. Leukoplakia အဖြူကွက်၊
2. Palatal or Mandibular Torus အရိုးဘုများ၊
3.Inflammation or irritation ယောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်နဲ့ မသင့်တာနဲ့ ထိတွေ့ခြင်း၊
4.Irritation fibroma ခဏခဏ ထိမိရာကနေ အတွင်းထဲမှာ အသားမာလို ဖြစ်ခြင်း၊
5.Fordyce’s granules ချွေးထွက် (ဂလင်း) တွေက ပါးစပ်ထဲ ရောက်နေခြင်း၊
6.Hemangioma သွေးကြော အပိုပွားခြင်း၊
7.Inflammatory ulcer ယောင်ယမ်း အနာများ၊
8.Papillomas (ပက်ပလိုမား) အသားပို၊
10. Varicosities သွေးပြန်ကြော ဖေါင်းနေခြင်း၊
12. Angular stomatitis ကျီးကန်းပါးစပ်နာ၊
၁။ Leukoplakia အဖြူကွက်
ဖြူနေတဲ့အကွက်ကို ပိတ်ကျဲစနဲ့ ပွတ်ပေးလည်း ပျောက်မသွားဘူး။ ကင်ဆာနဲ့ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ အနာမျိုးနဲ့လည်း မဆိုင်ဘူး။ ဆေးလိပ်သောက်သူ၊ အရက်သောက်သူ၊ ခံတွင်းပိုးဝင်ခံရသူ၊ နေရာတစ်ခုမှာ ကွက်ပြီး ကိုယ်နဲ့ မသင့်တာနဲ့ တွေ့ထားသူ၊ (ဆစ်ဖလစ်)၊ ဗီတာမင် (အေ) နည်းခြင်း၊ ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲ၊ ဓါတ်ရောင်ခြည် သင့်ခြင်း၊ လျှပ်စစ်စီးကြောင်းတွေကနေ ဖြစ်စေတယ်။ အသက်ကြီးသူတွေမှာ (၄ဝ ကျော်) အဖြစ်များတယ်။ ယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေထက် ပိုဖြစ်တယ်။ လျှာ၊ ပါးစောင်၊ အထက်-အောက် ပါးစောင်ချိုင့် နေရာတွေမှာ လူတစ်ဝက်လောက် ဖြစ်တယ်။ ကျန်တဲ့နေရာတွေက အာခေါင်၊ အောက်နှုတ်ခမ်း၊ လျှာအောက်နေရာတွေမှာ ဖြစ်တယ်။ ဖြူပြီး နည်းနည်း ကြည်နေမယ်၊ ထူမယ်၊ အစဉ်းကြောင်းတွေ ရှိနိုင်တယ်။ အသီးလိုလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ မာတင်းနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ မျက်နှာပြင် ချောတာ၊ ကြမ်းတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အဖြူ၊ အဝါစိမ်းစိမ်း၊ ဆေးလိပ်သောက်သူဆိုရင် ညိုတိုတို ဖြစ်နိုင်တယ်။
မှိုကြောင့်ဖြစ်တာ၊ (အက်စ်ပရင်) သောက်လို့ ဖြစ်တာတွေက အဲလိုလုပ်ပေးရင် ရှင်းသွားနိုင်တယ်။ မသေချာရင် အသားစ ဖြတ်ယူစစ်ဆေးရမယ်။ ၄-၆ ရာခိုင်နှုန်းမှာ ကင်ဆာ ဖြစ်တတ်တယ်။ Erythroplakia နီနေတာမျိုးက ဆိုးတယ်။ ကိုက်မိ-ထိခိုက်မိတာ၊ သွားအတွက် အပိုပစ္စည်းထည့်တာက အဆင်မပြေတာ၊ သွား အဆင်မပြေ ပေါက်နေတာတွေကို စစ်ရ၊ ပြင်ရမယ်။
၂။ Palatal or Mandibular Torus အရိုးဘုများ
ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ အရိုးကနေဖြစ်တဲ့ မာနေတဲ့ ဘုတွေကို ခေါ်တယ်။ တဖြည်းဖြည်း ကြီးလာမယ်။ အနေရလည်း မခက်လှပါ။ အပေါ်ယံ အဖုံးလွှာ အနာဖြစ်တတ်တယ်။ Palatal torus အာခေါင်က ဖြစ်တာဆိုရင် အမာပိုင်း အလယ်မျဉ်းမှာ ဖြစ်တတ်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။
Mandibular torus မေးရိုးက နေဖြစ်တာဆိုရင် ရှေ့ပိုင်း အံသွားဘေးမှာ အဖြစ်များတယ်။ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း ဘယ်ညာဖြစ်တာ များတယ်။ အသက် ၃ဝ အောက် များတယ်။ ကုသစရာ မလိုပါ။ ခွဲလိုက်ရင်လည်း ရတယ်။
၃။ Inflammation or irritation ယောင်ယမ်းဖြစ်စဉ်နဲ့ မသင့်တာနဲ့ ထိတွေ့ခြင်း
ယောင်ယမ်းဖြစ်စဉ်နဲ့ မသင့်တာနဲ့ ထိတွေတာမျိုးတွေက ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကာကွယ်တဲ့ သဘောကနေ ဖြစ်လာတယ်။ ပါးစောင်မှာ အထက်သွားတန်းနဲ့ အောက်သွားတန်းကြား မျဉ်းကြောင်း အဖြူရောင်လိုလည်း ဖြစ်တတ်တယ်။ လိုအပ်ရင် ခွဲစိတ်ထုတ်ပစ်နိုင်တယ်။ မသေချာရင် အသားစ ဖြတ်ယူ စစ်ဆေးရမယ်။ ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်ကို ဖယ်ရှားကုသလိုက်ရင် အလိုလို ပျောက်မယ်။ Denture stomatitis သွားအတုက အဆင်မပြေလို့ ဖြစ်တယ်။ အသက်ကြီးပြီး Complete maxillary dentures သွားအတု တပ်ထားသူတွေထဲက ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်တယ်။ Nystatin suspension or cream ဆေးလိမ်းပေးနိုင်တယ်။
၄။ Irritation fibroma ခဏခဏ ထိမိရာကနေ အတွင်းထဲမှာ အသားမာလို ဖြစ်ခြင်း
မေးတဲ့သူမှာဖြစ်တာ ဒါ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ခဏခဏ ထိမိရာကနေ အတွင်းထဲမှာ အသားမာလို ဖြစ်တာ။ ပါးစောင်၊ လျှာဘေးအနား၊ အောက်နှုတ်ခမ်းတွေမှာ အဖြစ်များတယ်။ မနာဘူး။ ခပ်တင်းတင်းရော ပွစိစိပါ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဖြစ်တဲ့အဖုက ဘေးနေရာထက် အရောင်ပျော့တယ်။ ကြာရင် အနာဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်။ (၁) စင်တီမီတာထက် မကြီးဘူး။ အသက်အရွယ်မရွေး ဖြစ်တယ်။ သူ့အလိုလို မပျောက်ရင် ခွဲထုတ်ရမယ်။ ပြန်ဖြစ်တာလည်း ရှိမယ်။
လျှာပေါ်မှာ ဖြစ်တာဆိုရင်တော့ Neurofibroma, Neurilemmoma or Granular cell tumor တွေ မဟုတ်တာ သေချာအောင် လုပ်ရမယ်။ ပါးစပ် အောက်နှုတ်ခမ်းနဲ့ ပါးစောင်မှာဆိုရင် Lipoma, Mucocele or Salivary gland tumor တွေ မဟုတ်တာ သေချာစေရမယ်။ ရှားပါးတဲ့ Benign neoplasms of Mesenchymal origin ကိုလည်း ဖယ်ထုတ်ရမယ်။ ခွဲထုတ်ပြီး စစ်ဆေးဘို့ လိုတာတွေ ဖြစ်တယ်။
၅။ Fordyce’s granules ချွေးထွက် (ဂလင်း) တွေက ပါးစပ်ထဲ ရောက်နေခြင်း
ချွေးထွက် (ဂလင်း) တွေက ပါးစပ်ထဲ နေရာလွဲ ရောက်နေတာ ဖြစ်တယ်။ အစုလိုက် များတယ်။ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ရောထွေးနေတာလည်း ဖြစ်တယ်။ အံဆုံးတွေ ဘေးမှာ ဖြစ်တယ်။ ဘယ်-ညာ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အောက်နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ သွားဖုံး၊ အာခေါင်တွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ အသက် ၂ဝ-၃ဝ မှာ အဖြစ်များတယ်။ Candida albicans မှိုကြောင့်ဖြစ်တာက ဂွမ်းစနဲ့ ရှင်းပေးတာ ပျောက်မယ်။ ဒါတွေကတော့ မပျောက်ဘူး။ ဆေးကုသဖို့လည်း မလိုပါ။
၆။ Hemangioma သွေးကြော အပိုပွားခြင်း
သွေးကြောတွေ အပိုပွားခြင်းက မွေးရာပါ ဖြစ်တယ်။ ပြားချပ်ချပ်နေတယ်၊ မဟုတ်ရင် နည်းနည်း ဖေါင်းနေမယ်။ အနီရောင် ဒါမှမဟုတ် နီပြာပြာ ဖြစ်တယ်။ အနားသတ် မတိကျဘူး။ နှုတ်ခမ်း၊ လျှာ၊ ပါးစောင်၊ အာခေါင်တွေမှာ ဖြစ်တယ်။ သူ့ကို ခိုက်မိတတ်တယ်။ အနာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။ ပိုး ဝင်လာနိုင်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေမှာ ပိုဖြစ်တယ်။ သူ့အလိုလို ပျောက်တာ များတယ်။ Surgery, Sclerosing agents, Cryotherapy နည်းတွေနဲ့ ကုနိုင်တယ်။ ကင်ဆာ မဟုတ်ပါ။ ကုသလိုက်ရင် ပြန်မပေါ်ပါ။
ဒီအနာ မြန်မာလူမျိုး အတော်များများကြီးကို တွေ့ဖူးတယ်။ ရေသောက်တာတောင် နာတယ်။ အားနည်းနေချိန်၊ စိတ်ဖိစီးမှု များနေချိန်၊ ခရီးထွက်ရလို့ အစား၊ ဝမ်းသွားမမှန်သူတွေ၊ ဝမ်းချုပ်သူတွေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆတယ်။
၇။ Inflammatory ulcer ယောင်ယမ်းအနာများ
(က) Aphthous (အက်ဖ်သပ်စ်-အာလ်ဆာ)
အတော်နာတယ်။ ပြန်ပြန်ဖြစ်တယ်။ တစ်ခုမကလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ၂ဝ-၆၀ ရာခိုင်နှုန်းသော လူတွေမှာ ဖြစ်ကြတယ်။ ဘာလို့ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ အတိအကျ မသိရဘူး။ Immunologic, Microbiologic and Nutritional factors တွေကို စဉ်းစားကြတယ်။ (၃) မျိုး ခွဲနိုင်တယ်။
(၁) သာမန်အနာ ခံတွင်းမှာ နေရာတကာ ဖြစ်တယ်။ ၁ဝ ရက်အတွင်း ပျောက်သွားမယ်။ ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။
(၂) Major aphthous ulcers ကပိုကြီးတယ်။ ၂ စင်တီမီတာလောက်အထိ ရှိမယ်။ ပျောက်အောင် အချိန် (၆)ပတ် ယူတယ်။
(၃) Herpetiform ulcers အမျိုးအစားကတော့ ၁-၂ ပတ်ကြာရင် ပျောက်တယ်။ အရည်ကြည် အဖုလေးကနေ စဖြစ်ပြီးမှ အနာဖြစ်လာတယ်။ Crohn’s disease, Neutropenia and Sprue ရောဂါတွေကိုလည်း စစ်ဆေးသင့်တယ်။
ပျောက်ဆေးဆိုတာ မရှိပါ။ ဒါပေမဲ့ သက်သာအောင် Topical steroids (0.5% Hydrocortisone) (စတီရွိုက်) ဆေးလိမ်းပေးနိုင်တယ်။ သိပ်ဆိုးသူတွေကို (စတီရွိုက်) ဆေး ပါးစပ်ကနေ သောက်ခိုင်းတယ်။ Tetracycline mouth wash (Achromycin V Oral Suspension) ဆေးနဲ့ ပါးစပ်ကို ဆေးတာလည်း အကျိုးရှိတယ်။ Chlorhexidinegluconate oral rinse (Peridex) ဆေးသုံးတာလည်း သက်သာတယ်။
ဒီအနာ မြန်မာလူမျိုး အတော်များများကြီးကို တွေ့ဖူးတယ်။ ရေသောက်တာတောင် နာတယ်။ အားနည်းနေချိန်၊ စိတ်ဖိစီးမှု များနေချိန်၊ ခရီးထွက်ရလို့ အစား၊ ဝမ်းသွားမမှန်သူတွေ၊ ဝမ်းချုပ်သူတွေမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆတယ်။ ထုံဆေး လိမ်းဆေးလေး လိမ်းရင် ခဏနဲ့ထုံသွားပြီး စားလို့ ရတယ်။ တစ်နပ်တစ်ခါ ထပ်လိမ်းရတယ်။
(ခ) Traumatic ulcers ထိခိုက်ရာက အနာဖြစ်ခြင်း
ကိုက်မိတာ၊ သွားအတု အဆင်မပြေတာ၊ သွားတိုက်တံနဲ့ ခိုက်မိတာ၊ သွားအချွန်နဲ့ ထိခိုက်မိတာ၊ မသင့်တာကို စားမိ၊ သောက်မိတာတွေကနေ ဖြစ်စေတယ်။ သူ့အလိုလို ပျောက်တယ်။ မြန်တယ်။ မပျောက်နိုင်ရင် ကင်ဆာကို စစ်ဆေးပါ။
၈။ Papillomas (ပက်ပလိုမား) အသားပို
တချို့ခံတွင်း အသားပိုက ကြွက်နို့ဖြစ်စေတဲ့ Papillomavirus (ဗိုင်းရပ်စ်) မျိုးကွဲကနေ ဖြစ်စေတယ်။ ဖြစ်နေပေမယ့် ဘာမှ မခံစားရဘူး။ ၁ စင်တီမီတာလောက်သာ ကြီးတယ်။ တစ်ခုတည်းဖြစ်တာ များတယ်။ ပါးစပ်ထဲ ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အာခေါင် အပျော့နေရာမှာ အဖြစ်များတယ်။
၉။ Epulisfissurata (အိပြူလစ်)
သွားအတုကနေ ဖြစ်စေတယ်။ (ဖိုက်ဘရပ်-တစ်ရှူး) တွေ အပိုဖြစ်တာ။ သွားအတုအသစ် လဲဖို့လိုမယ်။ ခွဲစိတ်တာလည်း လိုနိုင်တယ်။
၁၀။ Varicosities သွေးပြန်ကြော ဖေါင်းနေခြင်း
သွေးပြန်ကြောတွေ ဖေါင်းနေတာ၊ လျှာအောက်မှာဖြစ်တာ များတယ်။ ပါးစောင်နဲ့ ပါးစပ်နှုတ်ခမ်းမှာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပြာနေတယ်။ ဖိလိုက်ရင် သွေးစီးလျှောက်တာ မြင်ရမယ်။ ဆေးကုစရာ မလိုပါ။
၁၁။ မက္ခရုနာ Thrush (Oral candidiasis)
Moniliasisလို့လည်း ခေါ်တယ်။ ရေးခဲ့တဲ့ (၁ဝ) မျိုးက လူကြီးတွေမှာဖြစ်ပြီး မက္ခရုနာက ကလေးမှာသာ ဖြစ်တယ်။ ကလေးမှာတောင် နို့တိုက်အရွယ် ကလေးငယ်တွေ၊ လျှာ၊ အာခေါင်၊ ပါးစောင်တွေမှာ အဖြူဖတ်တွေဖြစ်ပြီး ဘေးက နီနေတယ်။ နာတယ်၊ နို့စို့ရ၊ အစာစားရ ခက်တယ်။ ကလေးရဲ့ လျှာကို အဝတ်သန့်သန့်လေး လက်ညှိုးမှာပတ်ပြီး အဖြူဖတ်တွေ ရှင်းပေးပါ။ မိခင်နို့ကို အမြဲသန့်နေပါစေ။ လိုအပ်ရင် Nystatin Oral Suspension 4-6 mL တစ်နေ့ (၄)ကြိမ် တိုက်ပါ။
၁၂။ Angular stomatitis ကျီးကန်းပါးစပ်နာ
ကျီးကန်း ပါးစပ်နာကို Angular stomatitis (Cheilosis or Angular cheilitis) လို့ ခေါ်တယ်။ ပါးစပ်-ထောင့်စွန်း နှစ်ဖက်လုံးမှာဖြစ်တာ များတယ်။ ကွဲကြောင်းလေးတွေ ဖြာထွက်လာမယ်။ သွေးထွက်တတ်တယ်။ အနာအထိ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အနာကနေ မှိုပိုးဝင်လာရင် Candida albicans (Thrush) ဖြစ်မယ်။ ဗက်တီးရီးယားလည်း ဝင်နိုင်တယ်။
– VITAMIN B 2, Riboflavin ဗီတာမင် ဘီ (၂)ဆေးသောက်ပါ။ ကြွယ်ဝစာ စားပါ။ နို့နှင့် နို့ထွက် အစာများ၊ ဥ၊ အသည်း၊ အသီးအရွက်၊ ဆန်၊ ဂျုံ၊ ရိစ်။ Vitamin C ရအောင် စိမ်းတဲ့ အသီးအရွက်-အသီးအနှံတွေလည်း စားပါ။
– မှိုကြောင့်ဖြစ်ရင် Antifungal creams မှိုအတွက် လိမ်းဆေးNystatin, Imidazoles, Bifonazole, Clotrimazole, Econazole, Ketoconazole, Nizoral®, Miconazole, Tioconazole တစ်ခုခု သုံးနိုင်တယ်။ Antifungal drug မှိုအတွက် စားဆေးImidazoles, Allylamine
– Clotrimazole and Betamethasone, Nystatin and Triamcinolone Acetonide စတီရွိုက်နဲ့ ရောထားတဲ့ ဆေး သုံးနိုင်တယ်။ 1% Hydrocortisone လည်း လိမ်းနိုင်တယ်။ ရေယုံဆိုရင် မသုံးပါနဲ့။
← ထမင်းလုံးတစ္ဆေ (Hypnic Jerk)
လည်ပင်း ကျီးပေါင်းတက်ခြင်း →
April 30, 2019 Kyal Sin Lin 0
One thought on “ခံတွင်း-ပါးစပ်မှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါတွေ (Common Oral Mucosal Lesions)”
Myo Win Naung
ေက်းဇူးျပဳ ၍ အၾကံျပဳေပးပါခင္ဗ်ာ။